"မြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူရာ လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်ကို သင့်လက်မှတ်တစ်ချက်ဖြင့် ကာကွယ်ပေးပါ (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်)" - Myanmar Network
"မြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူရာ လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်ကို သင့်လက်မှတ်တစ်ချက်ဖြင့် ကာကွယ်ပေးပါ (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်)"
Posted by Susan Naing on February 3, 2013 at 1:44 in နိုင်ငံခြားသတင်းများ
လုမ္ဗိနီဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေရာမှ ၁၈၉၆ မှာ အိန္ဒိယရှေးဟောင်း သုတေသနဌာနမှ ဒေါက်တာအလွိုက်ဖျူရာတို့ရဲ့ ဖော်ထုတ်ချက်ကြောင့် ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ တွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုကား မရှိခဲ့သေးပါ။ ၁၉၆၇ - ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဦးသန့် ဘုရားဖူးရောက်စဉ်အခါမှသာ လုမ္ဗိနီဒေသထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂမှ အကူအညီပေးရေး စသည့် အစီအမံများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သိဒ္ဓတ္ထအလောင်းတော်ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ရာ ယနေ့ခေတ် နီပေါနိုင်ငံအတွင်းရှိ လုမ္ဗိနီအထိမ်းအမှတ်နှင့် ဖွားမြင်ပြီးခါစမှာပင် "အဂ္ဂေါဟ မသ္မိ လောကဿ" တစ်လောကလုံးတွင် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သည် ဟု ဥဒါန်းကျူးရင့်ခဲ့ရာ၊ ရေသန့်စင်ခဲ့ရာ ရေကန်တော်
Permalink Reply by Nant Thin Thin Hmwe on February 12, 2013 at 19:28
Permalink Reply by Zaw Win on July 23, 2013 at 23:55
I've already signed on it. Please sign on above link if you areaBuddhist. We need to conserve our heritage.